Zandarimariam-pirenena : Azo tsapain-tanana ny ady amin’ny kolikoly -
AccueilSosialyZandarimariam-pirenena : Azo tsapain-tanana ny ady amin’ny kolikoly
11/01/2018 admintriatra Sosialy 0
“Azo tsapain-tanana fa nody ventiny tsikelikely ny rano natsakaina”. Io fehezanteny io no nentin’ny jeneraly Randriamahavalisoa Girard, sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimariam-pirenena namehezana ireo dingana sy ezaka vitan’ny teo anivon’ity vondron-kery ity teo amin’ny resaka kolikoly. Araka ny tatitra nomen’ity tompon’andraikitra ambony ity, dia trangana kolikoly miisa enina no efa nolavin’ireo mpitandro filaminana eo anivon’ny zandarimaria , tamin’iny taon-dasa iny. Isan’izany, ilay niseho teny amin’ny borigady Itaosy vao tsy ela akory, izay nampidoboka am-ponja mpianaka. Miisa valo kosa ny fitambaran’ny olona voarohirohy tamin’ny fanaovana ity asa maloto ity ka efa nampidirina am-ponja vonjimaika avokoa ny dimy tamin’izy ireo. Nahazo fahafahana vonjimaika ny roa, raha toa ka mbola ao anatin’ny fanadihadiana tanteraka ilay fanimbalony. “Efa vokatra izany, ary azo atao ho afa-po izahay eto anivon’ny zandarimaria”, hoy ihany ny nambaran’ny jeneraly Randriamahavalisoa Girard. Araka ny nambaran’ity sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimaria ity moa, dia hotohizana ary hohamafisina hatrany ity ady amin’ny kolikoly izay isan’ny nampitaraina ny vahoaka ity. ola mitotaly manodidina ny 06 tapitrisa Ariary tany ho any moa no nentin’ireo olona ireo nandrabirabiana zandary mba hanao zavatra tsy ara-drariny sy mifanohitra amin’ny lalàna, saingy nolavin’ireto farany izany noho ireo baiko sy ireo toromarika faran’izay hentitra nomen’ny lehiben’izy ireo.
Mitohy ny fanadiovana anatiny
Araka ny voalazan’ity sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimariam-pirenena ity, dia isan’ny fanamby napetrany ho amin’ity taona vaovao ity ny fanohizana hatrany ny fanadiovana anatiny, izay efa nimasoana tamin’iny taon-dasa iny. “ Mbola entina amin’ity taona ity ny fanatonana hatrany ny vahoaka sy ny fihainoana ny feon’ny olon-drehetra tsy ankanavaka mba ahafahan’izy ireo mankasitraka ny asan’ny zandary”, hoy ny nambarany. Raha omena moa ny salan’isa tsotsotra, dia manamboninahitra miisa 14 sy manamboninahitra lefitra miisa 263 no niharan’ny fanasaziana tamin’iny taona 2017 iny, noho ny resaka fandikan-dalàna. Mbola azo antoka noho izany fa hisy fanatsarana hatrany ny vokatra eo anivon’ity vondron-kery ity amin’ny fanohizana ireo paikady izay hita fa tena nahomby ireo. Efa nahatsapa fahafaham-po rahateo ny vahoaka tao anatin’izay telo volana nametrahana sy nanatanterahana ny baiko sy ny toromarika nomen’ny jeneraly Randriamahavalisoa Girard izay. Tsy ny resaka fanasaziana ihany anefa no hita ao anatin’ity vondron-kery ity, fa dia nambaran’ ity tompon’andraikitra ambony ity fa mahay mankasitraka ny zavatra tsara vitan’ireo manam-pahefana ihany koa izy ireo. Manamboninahitra miisa 42 sy Manamboninahitra lefitra miisa 360 izao no notolorana fankasitrahana. Tahaka ireo mpiasam-panjakana rehetra moa, dia manana ny lalàna mifehy azy, izay mihatra avy hatrany ihany koa ny eo anivon’ny zandarimariam-pirenena.